HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 6-OCT-2020
Tuesday October 06, 2020 - 08:32:57 in Wararka by Mogadishu Times
Ra'iisul Wasaare Roobe oo la kulmay Amiirka Dalka Kuwait Ra'iisul Wasaaraha XFS Md.Maxamed Xus een Rooble oo booqasho ugu tagay Amiirka cus ub ee dalka Kuweyt Sheekh Nawaaf Al-Axmed Al-jaabir Al-sabaax ayaa gaarsiiyey tacsida Shaca
Ra'iisul Wasaare Roobe oo la kulmay Amiirka Dalka Kuwait Ra'iisul Wasaaraha XFS Md.Maxamed Xus een Rooble oo booqasho ugu tagay Amiirka cus ub ee dalka Kuweyt Sheekh Nawaaf Al-Axmed Al-jaabir Al-sabaax ayaa gaarsiiyey tacsida Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed ee ku aaddan geeridii Alle ha u naxariistee Amiirka dalk aas Marxuum Sabaax Al-Axmed. 2da Hoggaamiye ayaa iska xogwareystay mustaqbalka xiriirka labada dal iyo muhiimadda ay leed ahay in la sii joogteeyo isk aashiga ku saleysan walaa ltinimada iyo is-garab ista agga, iyada oo Ra'iisul Wa saare Rooble uu soo bandhigay sida shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay murugada ge erida Amiir Sabaax ay ula qeybsanayaan wala alahooda dalka kuweyt. Sidoo kale, R/Wasaara ha waxa uu tacsida la wadaagay Guddoomiyaha Golaha Ummadda dalka Kuweyt Mudane Marsu uq Alqaanim, Dhiggiisa dalkaas Mudane Sabaax Khaalid Al-Axmed, Ku-xigeenka Taliyaha Ciidam mada Ilaalada Qaranka Mishcal Al-Axmed, Ami irrada iyo dhammaan xubnaha Qoyska reer Sabaax ee haya talada dalka Kuweyt. Intaas kaddib, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu booqday qabriga Mar xuum Sheekh Sabaax Al-Axmed oo uu u soo duc eeyey, Eebbana uga baryay in uu naxariistii Jan no ka waraabiyo. Ra'iisulwasaaraha iyo wafdigiisa ayaa Kuwait u tagay in uu hoggaanka iyo shacabka Kuwait ga arsiiyo tacsida dowladda iyo Shacabka Sooma aliyeed ee ku aaddan geeridii Sheikh Sabaax Al -Axmed oo ahaa hoggaamiye aragti dheer oo is aga iyo shacabkiisaba uu xiriir wanaagsan oo walaalnimo iyo iskaashi kala dhexeeyo shacabka Soomaaliyeed. XFS iyadoo garowsan kalgacaylka walaaltin imo ee Amiir Sheekh Sabaax Al-Axmed uu u hay ey shacabka, dowladda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya iyo doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay adkeynta xiriirka Labada dal, waxa ay xaq iijinaysaa sida ay uga go'an tahay in la sii xoojiyo lana sii horumariyo dhaxalka diblumaasiyadeed ee marxuumku uu uga tagay labada dowladood.
Md.FINISH oo ku dhowaaqay qorshe cusub oo la xiriira dhagxaanta jidadka Muqdisho
Gudoomiyaha G/Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa shaaciyey in ay w adaan qorshihii u dambeeyay ee lagu furi lahaa dhammaan jidadka xiran ee magalaada Muqdisho, xilli Habeen hore xaafadaha qaar laga qaaday dhagaxdii lagu jaray wadooyinka.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in todo baadkan gudihiisa ay arintaan ku soo gaba-gab eynayaan, sida uu balan qaaday.
Waxa uu xusay in horay sidaan oo kale uu ba lan-qaad u sameeyay, balse ay jireen duruufo am ni oo u saamixi waayey inuu fuliyo balan-qaad kaas oo dhagaxda laga qaado wadooyinka xiran ee Muqdisho.Sanad ka hor markii xilkaan loo magacaabay Cumar Filish, waxa uu sidaan oo kale u balan-qaaday in dhagaxda laga qaadi do ono wadooyinka magaalada Muqdisho oo dhi bato badan ay dadku ku qabaan. Balse dhawaan ayuu sanad guuradii koowaad ee xil-heyntiisa ka shaaciyay inuu ku guul-dareystay fulinta balan-qaadkaas.
Hadda waxa uu sheegay guddoomiyuhu inuu socdo qorshe lagu qaadayo dhagaxda ku go’an inta badan wadooyinka caasimadda, iyadoo ay garab socdaan qorsheyaal amni.
Hadalka guddoomiyaha gobolk Banaadir Md.Cumr Filish ayaa ku soo adaya, iyadoo Hab een hore qaar kamid ah iskoysyada Muqdisho laga sikiyay dhagaxdii tiilay in ka badan sanadkii la soo dhafay.
Isgoysyada ay dowladda Soomaaliya Habeen hore dhagaxda ka qaaday waxaa kamid ah, KPP, Tarabuunka, Digfeer iyo qeybo ka tirsan deg mada Wadajir, waxaana la geeyay goobo kale oo jid caddeyaal u badan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare "Hote lada Lagama Kireyn Karo 2 Qof oo La Xaqi ijin Inay Is Qabaan”
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa ka hadlay falalka ku fsiga ah ee muddooyinkii dambe aad ugu soo ba dayay dalka Soomaaliya, isagoona baaq u diray Wasaaradda amniga dowladda.
Guddoomiye Baashi ayaa waxaa uu sheegay in muhiim ay tahay in hal meel looga soo wada je ysto oo si dhab ah loola dagaalamo falka kufsiga ee lagula kaco dumarka, isla markaana shacab ka iyo hay’addaha ku shaqada leh ay iska kaa shadan ka kahortegiisa.
Sidoo kale Baashe Yuusuf ayaa ku baaqay in laga hortego maand ooriyaha noocyadiisa kala duwan oo qeyb ka qaata falalka xad-gud ubyada ah, wuxuuna ku taliyay in la koontaroolo meelaha dalka wax kasoo galaan, si dalka aan loo gelin maandooriye.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ayaa shee gay in lagama maarman ay tahay in lala yimaado qorshe lagu ogaanayo habka loo dego Hotelka ku taalla Muqdisho, isagoona ceyb wen ku tilmaamay in falalka xad-gudubyada ah mararka qaar ka dhacaan hotelada.
”Labo qof oo rag iyo dumar ah oo aan la xaq iijin inay is qabaan Hoteel mawada dagi karaan Hoteelkii aan weydiinin Shahaadada Nikaaxa wuxuu ka qeyb-qaadanayaa in la fidiyo waxyaab aha foosha xun-xun” ayuu yiri Baashe Yuusuf.
Ugu dambeyn Guddoomiye Baashi Yuusuf ayaa Wasaaradda amniga Xukuumadda ugu baaqay inay soo saarto awaamiir la xiriirta in dadka aan is qabin ee raga iyo durmaka aysan hotel isla degan karin, si looga hortego falalka kufsiga ee xiliyada qaar dhaca.
Gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa mud dooyinkii dambe kusoo badayay falalka isugu jira kufsiga iyo dilka ee loo geysanayo dumarka, waxaana kufsigii ugu dambeeyay Degmada Afgooye loogu geystay laba haween oo mid da’deedu lagu sheegay 90 jir.
Qoraal kasoo baxay Guddiga Badbaadinta Suxufiyiinta, ee hay’adda Amnesty Internatio nal ayaa waxaa lagu sheegay inay welwel ka qabaan dhaqan-gelinta Xeerka Saxaafada,waxaana Madaxweyne farmaajo ay ugu baaqeen in aan la dhaqan gelin Xeerka.
"Anaga oo ku hadleeyna magaca Hayadda Am nesty International, Guddiga Badbaadinta Suxu fiyiinta, , waxaan kula wadaageeynaa welwelka la xiriira wax ka beddelka sharciga saxaafadda ee aad saxiixday in la dhaqan geliyo waayo waa mid dhibaato ku ah Saxafiyiinta Soomaaliyeed”
Sidoo kale qoraalka Amnesty International ay aa waxaa lagu sheegay in Urrurada Saxaafadda ay diiwaangeliyeen xannibaadyo adag oo la sa aray saxaafadda iyo xuquuqda xorriyadda had alka ee Soomaaliya sanado badan, isla marka ana marar badan ugu baaqeen dowladda Soom aaliya inay abuurto jawi ku habboon sharciga oo loogu talagalay saxafiyiinta iyo ururrada saxaafad da inay ku shaqeeyaa kahor doorashooyinka qar anka ee lafilayo inay dhacaan dabayaaqada san adka 2020 ama horaanta sanadka 2021.
Qoraalka Hay’adda Amnesty International oo aad u dheer ayaa waxaa sidoo kale lagu sheeg ay in balan qaadka dowlada ee ah in warbixin xo r ah oo madaxbanaan ay si gaar ah muhiim u ta hay. Abuuritaanka jawi ku habboon sharciga iyo amniga warbaahinta waa u baahan tahay tall aabooyin muhiim ah.
"Waxaan qireynaa talaabooyinka ay dowla daadu qaaday ilaa iyo hadda si loo wanaajiyo xu riyada saxaafada loona ixtiraamo xuquuqda xor riyatul qowlka ee dalka, gaar ahaan balanqaadkii aad muujisay May 3, 2020 ee dib u eegista aad Madaxweyne ku sameyneyso xeerka ciqaabta ayaa lagu yiri” Warbixinta Amnesty.
Si kastaba ha ahaatee waxaan ka walaacsan nahay faallooyinka aad ka bixisay warbaahinta 26-kii Sebtember, mudane, oo aad ku andacoona ysay in saxaafaddu ay ku dhaqmayso xirfad-da rro isla markaana ay suxufiyiinta qaar xiriir la leey ihiin Al-Shabaab. Faallooyinka noocan oo kale ah waxay saxafiyiinta Soomaaliyeed, kuwaa oo durba ku shaqeeya xaalad kacsan, halis ugu jira aargudasho iyo wiiqida ballanqaadyadii wanaa gsanaa ee laga sameeyay xorriyadda warbaah inta. Intaa waxaa dheer, sharciga cusub ee sax aafadda waxaa kaloo ku jira qodobo khatar ku ah xuquuqda aadanaha, oo ay ku jiraan xorriyadda hadalka.
Urrurada Saxaafadda Soomaaliya iyo wariye yaasha ayaa dhowr jeer ooh ore waxaa ay wal aac ka muujiyeen xeerka Saxaafadda Soomaal iya, iyaga oo sheegay in ay ku jiraan qodobo kha tar ku ah Warbaahinta iyo Wariyeyaasha.
Deni oo mar kale Dubai u tegay la kulanka Madaxda DP World
Madaxweynaha Puntland, Saciid C/ Deni oo ku sugan M/ Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa in uu halkaas kula kulmo mas’ uuliyiin ka tirsan Shirkadda DP World oo haatan maamusha dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Madaxweyne Deni oo maalmo ku sugnaa M/Nayrobi ee dalka Kenya, ayaa uga sii gudbay Imaaraadka Carabta, waxaa na safarkiisa ugu muhiimsan in uu la kulmo mas’uuliyiinta Shirkadda DP World.
Md.Deni ayaa la filayaa in uu mas’uuliyiinta DP World kala hadlo, arrinta De kedda Boosaaso oo aysan wax shaqo ah ka qa ban mudadii ay gacanta ku haysay, isla mark aana ay ciid ka buuxsantay.
Maxay Ka wada Hadleen Madaxweyne Geelle iyo Xasan Cali Kheyre?
Madaxweynaha wadanka Jabuuti Cismaaciil Cumar Geelle ayaa Shalay xafiiskiisa ku qaabilay ra’iisalwasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khe yre oo dhowaan ku dhawaaqay inuu yahay mu sharax madaxweynaha Soomaaliya
2da mas’uul ayaa kawada hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladda guud ee siy aasadeed ee dalka iyo arr imaha dooras hooyinka oo dho waan la filaayo in dalka ka qab soonto 2020-2021 sida lagu ball amay shir kii Muqdisho.
Safarka Kheyre uu ku tagay Jabuuti waa kii u gu hooreeyey uu dalka uga baxo tan iyo markii xilka laga qaaday 25-kii July 2020, kadib markii codka kalsoonida ay kala laabteen xildhibaann ada G/SH/B/F/Soomaaliya.
Roobab Khasaaro Geystay Oo Ka Da’ay Deegaanno Ka Tirsan Sool
Saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan Gobolka Sool ayaa waxaa ka da’ayay roobab ma hiigaan oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada, sida ay sheegaaan wararka aan halkaas ka hel eyno.
Roobka ayaa siweyn uga da’ay deegaan lagu magacaabo Dal-yare oo xiga bariga Somaliland, waxaana roobka uu geystay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed, iyadoo deegaa nkaas uu yahay mid dhul beero lay ah.
Ugu yaraan laba ruux oo kamid ahaa dadka dee gaanka ayaa ku geeriyooday roobkii ka da’ay Dal-yare, isla markaana waxaa ku dumay ceel biyoodyo, sidoo kalena waxaa ku baaba’ay beero ku yaalla deegaanka, kadib markii ay ku rogm adeen biyo farabadan.
Beeralayda iyo dadka degaankaas oo warbaa hinta la hadlay ayaa ku baaqay in gurmad deg deg ah lasoo gaarsiiyo, si looga caawiyo beeraha iyo ceelasha oo uga burburay roobkii halkaas ka da’ay.Deegaano dhowr ah oo ka tirsan Gobolada dalka Soomaaliya ayaa ka curtay roobka deyta ah, isla markaana waxaa saacadihii lasoo ka da’ ay roobab mahiigaan oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada.
Nin hubeysan oo si Arxan Darro ah Muqdisho ugu Dilay Gabar ay kala tageen
Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir wa xaa Dorraad gelinkii dambe abaare 5:30 ka dhac ay dhacdo xanuun badan, kadib markii nin hu beysan uu Toorey ku dilay gabar ay kala tageen oo daganeyd xaafadda Siliga Ameerikaanka.
Marxuumadda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Zamzam Cabdiwaaxid Daahir, waxaana ninka dilay ay ka dii day inay isku laabtaan, sida uu warbaahinta uu sheegay Aaba heed, Cabdiwaa xid Daahir Geelle.
Sidoo kale Amran Abshir Cabdi oo ay dha shay marxuumadda ayaa sheegtay in ninka dilka geystay markii hore loo diiday inuu gudaha u soo galo guriga, balse uu soo jabiyey albaabada, ka dibna uu hooyada Mindi kaga dhuftay qeybaha sare ee jirka.
"Marka hore inuu guriga soo galo ayaa loo dii day ninka dilka geystay, basle Aabaabda ayuu soo jebiyay, kadibna waxaa uu afka ka qabtay ho oyadey oo fadhida guriga dhexdiisa, isaga oo markii dambe toorey qeybaha sare ee jirka ugu dhuftay Hooyo, anigana waan kasoo cararay gob
ta.” ayay tiri Amran Abshir Cabdi oo 8 sano jir ah. Wararka ayaa sheegaya in markii dambe gac anta lagu soo dhigay eedeysanaha oo isku dayey inuu goobta ka baxsado.
Laamaha ammaanka oo la wareegay kiiskaasi ayaa sidoo kale haatan wada baaritaano dheer aad ah oo ku aadan dhacdadaasi.
Booliiska Somaliland oo Gacanta Ku Dhig ay Dad Faafinayey Diinta Kiristaanka
Booliska Somaliland ayaa Hargeysa ku xiray labo qof oo ka baxay diinta Islaamka isla mark aana bilaabay in ay faafiyaan diinta Kirishtaanka.
Afhayeenka ciidanka Booliska Somaliland Gaashaanle Sare Faysal Xiis Cilmi oo la hadlay Warbaahinta ayaa ka hadlay labada qof oo ay todobaadkii hore ciidanku soo qabteen, iyagoo gudaha Somaliland ku faafinaya diinta Kirisht anka.
"Todobaadkii hore ciidanka booliska waxa ay soo qabteen labo qof murtidiin ah oo Diinta Isla amka ka baxay, isla markaana noqday daaciyiin Diinta Kirishtaanka faafinayay, cidkas ta oo is tiraahda diinta Kirishtaanka halkan ku fidi gacanta ayaa lagu qab an doonaa” ayuu yiri Gaashaanle Sare Faysal Xiis Cilmi.
Afhayeenka ayaa xusay in kiiska labada qof loo heysto ay tahay inay yihiin dad murtidiin ah oo diinta Islaamka ka baxay, lana soo taagi do ono si loo marsiiyo sharciga, isagoo dadweynaha ka codsaday in cid Alle iyo ciddii ay uga sha kiyaan ay ku soo wargeliyaan booliska Somali land.
Qof Maxbuus ku ah Xabsiga Dhexe oo Shalay GERIYOODAY iyo sababta
Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha Xabsiga dhexe ee Xamar ayaa Shalay sheegay inuu geer iyooday mid ka mid ah Maxaabiistii ku xirneed gudaha Xabsiga dhexe.
Saraakiisha aan la hadalnay ayaa noo sheeg ay in Maxbuuskaan uu ku eedeesnaa dil loo gee stay qof shacab ah waxa uuna ka tirsanaa ci idanka Soomaaliya.
Maxbuuska dhintay ayaa magaciisa lagu soo koobay Cabdullahi, waxaana la sheegay in uu maalmihii la soo dhaafay wajahayay xaalado caa fimaad darro oo sababay in Shalay ku geeriyo odo Isbitaalka Martiina ee Muqdisho.
Saraakiisha aan la hadalnay ayaa sheegay in Maxbuuskan uu wajahay xaalado daryeel xumo, kuwaas oo sababay in ugu dambeyn u geeriyo odo waxaana wali ka hadlin taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Waa qofkii 3-aad oo maxbuus islamarkaana ku xiran Xabsiga dhexe ee geeriyooda, kuwaas oo la sheegay in dhamaantoodba ay u dhinteen daryeel la’aan iyo dayac ku heysata gudaha Xabsiga.
Sidoo kale weerarkii ka dhacay Xabsiga ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 20 qof, kuwaas oo qey ka noqonaya dadka xabsiga ku dhintay sanadkaan.
Qaar kamid ah maxaabiista Xabsiga dhexe oo la hadlay Caasimada Online ayaa sheegay in xaalado adag ay ka jiraan gudaha Xabsiga wax aana sii adkaatay nolasha maxaabiista tan iyo weerarkii Xabsiga Dhexe.
Cuba iyo Soomaaliya oo ka wadahadlay dhaqaatiir gacanta ugu jira Shabaab
Wasiirka arrimaha dibedda Cuba Bruno Ro driguez ayaa uga mahadceliyey dhiggiisa Sooma aliya, Axmed Ciise Cawad dadaalka ay dowladdi isu ugu jirto dammaanad-qa adka soo celinta laba dha khtar ee u dhashay Cuba oo in ka ba dan sannad ka hor laga af duubay Kenya.
Waxaa uu sidoo kale ca ddeeyay sida Cuba ay u do oneyso inay xoojiso xiriirka labada dal.
Dhakhaatiirtan Cuba ayaa la afduubay 12-kii Abriil, 2019 iyagoo ka shaqeynayay Kenya, tan iyo xilligaas dowladda Cuba waxay xiriir jo ogto ah la lahayd Kenya iyo Soomaaliya si dhaq aatiirtaasi loo soo badbaadiyo.
Bishii Abriil ee sanadkaan 2020, Madaxwey naha Cuba Miguel Diaz-Canel wuxuu la hadlay qoysaska dhibbanayaasha hal sano ka dib wux uuna u xaqiijiyey inkastoo cudurka Corona virus uu sameeyay dadaaladii ay wadeen haddana in Soomaaliya iyo Kenya ay kala shaqeyn doonaan soo deyntooda dhaqaatiirta.
Dhakhaatiirta kala ah Assel Herrera, oo ah khabiir ku takhasustay cudurada Guud kana soo jeeda gobolka Las Tunas iyo Landy Rodriguez, oo ah dhakhtar qalliin oo ka socda Villa Clara wa xay ka mid ahaayeen howlgalka caafimaadka ee Cuba ee Kenya.
Ciidamada Milatariga Soomaaliya ayaa dagaal muddo kooban socday ka dib qabsa day tuulada Basra oo qiyaastii 14 km galbeed uga beegan D/Balcad ee G/Sh/Dhexe halkaas oo ay gacanta ku hayeen dagaalaamyaasha Al-Shabaab.
Hawgalka lagu qabsaday Basra oo bilowday barqadii Shalay ayaa inta aanay caadamada dawl addu galin waxay dagaal ku galeen deegaanka la yiraahdo Daniga oo aan ka fogeyn Basra mark aas oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay qaraxyo iyo weerarro toos ahba la beegsatay ciidanka si da ay warbaahinta u sheegeen dadka deeg aanka.
Illaa hadda lama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka Basra lagu qabsaday mana jiro waxa warar ah oo ka soo baxay 2da dhinac ee uu dagaalku dhexmaray.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaas lagu gubay gaari nooca dagaalka oo ay saarnaayeen Ciidamo ka tirsan DFS, isla markaana weerarka uu kasoo gaaray dhimasho iyo dhaawac.
Basra ayaa ah tuulo istiraatiiji ah oo isku xirta degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan Gobolada Sh/Dhexe & Sh/Hoose, waxana intii muddo ahba gacanta ku haysay Al-Shabaab oo u adeegsan jirtay goob ay dadka ugu yeerto gaar ahaan kuwa ku nool Muqdisho iyo Balcad si ay awaamiirteeda u fuliyaan.
Shir ku saabsan Amniga Doorashooyinka oo Muqdisho ka socda
Shir ku saabsan amniga doorashooyinka dalka ayaa ka Lagu qabtay xerada Xalane iyadoo la do onayo in laga arrinsado sidii loo qurxin lahaa wakhtiga doorashada ee fooda nagu soo haya.
Shirkaan oo ay ka qeyb galayaan xubno ka socda dowladda Sooma aliya, dowladaha xubnaha ka ah, G/Banaadir, wakii lada Q/Midoobey, Midow ga Afrika iyo D/ Marey kanka. Waxaa la doonayaa in hay’adaha amniga Soomaaliya ay la wareegaan sugidda amniga go obaha ay doorahsooyinka ka dhacayaan, iyadoo bartamaha bishaan ay bilaaban doonto doorasha da aqalka sare.
Bishaan Octoobar ilaa laga gaaro bisha Febru ary waxaa socon doonta doorashooyin kala duw an, iyadoo uu jiri doono mashquul bad an, waxa ana hay’adaha ammaanka Soomaaliya laga doo nayaa iney sugaan amniga doorashooyinka guud ee dalka.
Abshir Suubow oo Shalay lagu dilay Degm ada Balcad
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dil uu Shalay askari ka tirsan ciidamada dowladda wiil dhalinyaro ahaa ugu geystay deg mada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ee D/G/Hir Shabelle.
Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Abshir Suubow, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyara da ku dhaqan gudaha degmada asi. Wararka ayaa sheegaya in dilka uu ka dha cay goob ganacsi oo uu marxuumka ku sugnaa oo ku taalla bartamaha degmada Balcad ee gob olka Shabeelaha Dhexe.
Ilo deegaanka ah ayaa sidoo kale inoo sheeg ay in dilka uu yimid, kadib markii ay xabad kaga fakatay marxuumka askari ka tirsan ciidamada ammaanka oo la qabtay.
Sidoo kale qaar ka mid ah ehellada ayaa wal aac xoogan ka muujiyey dilka wiilkooda, waxaa na ay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ask arigii ka dambeeyey falkaasi.
Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka maamulka degmada iyo sara akiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhac dadaasi.
Inta badan ciidamada dowladda ayaa dilal u geysta dadka rayidka ah ee ku sugan deegaan ada ay ka howl-galaan ee koonfurta & bartamaha dalka, kuwaas oo ku yimaada siyaabooyin kala duwan.
Hey’adda isku dabaridka arrimaha gargaarka Q/Midoobey ee OCHA ayaa ka digtay in roobab ka Soomaaliya ka curtay ay daadad sababi kar aan. Xafiiska OCHA ee Soomaali ya ayaa warbixin uu soo saa ray ku sheegay in curashada xilliga deyrta laga dareemay meelaha qaar oo roobab xoog leh ay ku hooreen.
Meelaha roobabka lixaadka leh ay ku hooreen ayey ku sheegtay warbixintan inay ka midyihiin gobollada Sool, Sanaag, Nugaal, Mudug, Galgad uud, Hiiraan iyo Bakool.
OCHA, waxay tilShalayy in roobabku ay sii ko rdhin karaan xaaladaha fatahaadaha iyo barak aca ka jira qeybo badan oo Somaliya ka mid ah.
Saameynta ugu badan ayaa waxaa ay roob abku ku yeelan doonaan sida ay OCHA warbixi ntan ku sheegtay dadka ku nool meelaha ay fata haaduhu ka jiraan, gaar ahaan dhulka ku teed san wabiyada Jubba iyo Shabeelle ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii hey’adan ayaa ugu baaqday maamullada deegaanadaas iyo hey’adaha la shaqeeya inay qorsheeyaan tallaabooyin looga jabaabo wax-yeellada ka dhalan karta xilli rooba adka Deyrta ee ku soo wajahan Soomaaliya.
Ciidamo ka tirsan Soomaali iyo Libiya oo ku dagaalamay Turkiga